Lionel Messi oo shaaca ka qaaday sababta ku qasabtay inuu fakis ku codsado inuu ka tago Kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 04 Seb 2020. Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ayaa shaaca ka qaaday sababta ku qasabtay inuu fakis ku codsaday inuu ka tago Kooxda Barcelona.
Lionel Messi ayaa fakis ahaan ugu sheegay Barcelona inuu doonayo inuu ka tago kooxda reer Catalonia xagaagan, kaddib guuldaradii 8-2 aheyd ee Bayern Munich.
Lionel Messi ayaa wareysi uu siiyay shabakda “Goal” ayaa wuxuu ku sheegay:
“Fakiska wuxuu ahaa inaan arrinta ka dhigo mid rasmi ah, sanadka oo dhan waxaa madaxweynaha u sheegayay inaan doonayo inaan baxo, lana gaaray waqtigii aan bixi lahaa, si aan u raadsado jiho kale ee cusub oo xirfadeyda shaqo ah”.
“Wuxuu ii sheegayay waqti kasta ii sheegayay (maya, waanu wada hadli doonaa) laakiin waxba ma dhicin, si aan arinta u cadeeyo si uun, madaxweynuhu wax fikrad ah igama siinin waxa uu ka hadlayo”.
“Dirista fakiska waxay iga dhigtay inaan si rasmi ah u tago oo aan xor ahay, iyo inaanan u adeegsan doonin, sanadka doorashada ah”.
“Ma ahayn in aan abuuro qalalaase ka dhan ah kooxda, laakiin si aan arrinta uga dhigo mid rasmi ah, sababtoo ah go’aankeyga wuxuu ahaa mid la gaaray”.
“Haddii aanaan soo dirin fakiska, waxba ma dhici laheyn, waxaana heystaa sanadkii doorashada ahaa ee aan ku joogayo sanadkuna wuu socdaa, waxay sheegeen waa inaanan ka hadlin bixitaankeyga kahor 10-ka June, laakiin waxaan ku celinayaa, waxaan ku dhex jirnay tartamada oo dhan mana ahayn waqtigii saxda ahaa”.
“Laakiin iyada oo aan loo eegin taas, madaxweynaha marwalba wuxuu igu dhahaa (Marka xilli ciyaareedku dhammaado, waa inaad go’aansataa inaad sii joogto ama aad baxdo), waligiis taariikh ma go’aaminin, waxay aheyd qaabka ugu fudud inaan dagaal la gelin, sababtoo ah ma dooneynin inaan la dagaalo kooxda”.